အသစ်ကငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အားသာချက်ကဘာတွေလဲ - တရုတ်လူးလူးစိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းကိရိယာ
အသစ်ကငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အားသာချက်ကဘာတွေလဲ? ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်အချို့ဒေသများရှိစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစက်ဖြတ်တောက်တဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာငရုတ်သီးကို stem ဒီဇိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုမလွှဲမရှောင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နို့တိုက်ကျွေးမှုစနစ်, ပို့ဆောင်မှုစနစ်, ဆုတ်ထားတာစနစ်, နှင့်ချစနစ်အားမြား: A ပြည့်စုံ capsicum သာသနာငါးအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အလားအလာကိုကဘာလဲ? မေးခွန်းအလျင်အမြန်ပြန်ဖြေခံရဖို့မရှိပါ။ အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသက်တာ၌ပြုလုပ်စောငျ့ရှောကျဖို့အနည်းငယ်အာရုံကိုတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်လို့ပဲ။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ငရုတ်သီးထုတ်ကုန်များခြုံငုံထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားအချိန်ကျော်နှစ်စဉ်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာသာ Qingdao အတွက်တစ်အကြီးစားအပေါ်ငရုတ်သီးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်စေ့စပ်အများအပြားကျေးရွာများနှင့်မြို့များရှိပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏အလားအလာဖောက်သည်များ၏အရေအတွက်ကိုနေဆဲအတော်လေးအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း, ဟူနန်, စီချွမ်နှင့်တရုတ်ရှိအခြားပြည်နယ်များလည်းငရုတ်သီးပြည်နယ်၏ကြီးမားသောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုဒေသများအချို့အတွက်, ငရုတ်သီးထုတ်ကုန်များ၏အလုပ် handwork ၏မူလဇာတ်စင်ဆဲဖြစ်တယ်, ဒါစျေးကွက်အပေါ်ငရုတ်သီးစက်ယန္တရားထားရန်ငရုတ်သီးစက်လည်းမရှိသည့်အခါ, ကမလွှဲမရှောင်တောင်သူလယ်သမားမိတ်ဆွေများက၏ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်အားဖြင့်ကြိုဆိုပါလိမ့်မည်။ ထိုအထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ဆက်ဆက်သင်ငရုတ်သီးထုတ်လုပ်မှု၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးပါမည်။
နည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနှင့်အတူအသက်တာ၌အဆင်ပြေစက်တွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့, သူတို့ကလည်းဈေးကွက်ထဲမှာပေါ်လာဖို့စတင်နေကြသည်။ ငရုတ်သီးကို stem ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုလည်းသူတို့ထဲကတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ငရုတ်သီး၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? ဒါဟာနေဆဲထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အခြေခံမူထဲကနေရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
1.Performance features တွေ: ဤပစ္စည်းကိရိယာများအဓိကအားဖြင့် (စိတ်ကြိုက်ခံရဖို့လိုအပ်) ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးပေါင်းနှင့်ငရုတ်သီးပုံသဏ္ဍာန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, ထိရောက်မှုမြင့်မားတဲ့, ငရုတ်သီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအနိမ့်မြင့်မားထိရောက်မှုဖြတ်တောက်ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်စိုစွတ်သောငရုတ်သီးမှေးကိုများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်, ထိုတစ်ခုတည်းသောစက်ထိရောက်မှုထက်ပို စျေးကွက်သာမန်ထုတ်ကုန်များ၏5ကြိမ်, တပြင်လုံးကိုစက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနိုင်ငံတကာထိပ်တန်းအဆင့်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအညစ်အကြေးကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်အဖြစ်အရန်ပစ္စည်းကိရိယာများအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းဒီထုတ်ကုန်, တပြင်လုံးကိုစက်ကစားသိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍ၏အလိုအလျှောက်စွမ်းဆောင်ရည်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်၏ကြီးမားသောနံပါတ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အရေးပါသောပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလူအင်အားများပြားတဲ့နေရာမှာအစားထိုးစစ်ဆင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နှင့်အလွန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
2. ပင်မအလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမ: ဆန်ခါစည်ကိုလှိမ့၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပြင်ပဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးနှင့်ဆန်ခါဆလင်ဒါမြို့ရိုးကိုငရုတ်သီး၏လက်ကိုင်ကိုမဖယ်ရှား၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ငှါ, ဆန်ခါပေါက် hinge အင်အားသုံးဖြတ်သန်းသောငရုတ်သီးလက်ကိုင်ဖို့စက်ထုတ်လုပ်ရန်။